Maamulka Dooxada Shabeele iyo saraakiil ka tirsan Itoobiya oo Ku kulmay Hiiraan – SBC
Maamulka Dooxada Shabeele iyo saraakiil ka tirsan Itoobiya oo Ku kulmay Hiiraan
iyadoo maalmihii ugu dambeeyay la hadal haya in ciidamo ka socda Dowlada Itoobiya ay gudaha u soo galeen qeybo ka mid ah gobolada Bartamaha Soomaaliya sida Hiiraan iyo Galgaduud ayaa wararka ka imanaya Deegaanada Baargaduud, iyo Ceel gaal oo hoosyimaada Magaalada Baladweyne Xarunta gobolkaasi Hiiraan, waxa ay sheegayaa in halkaasi ay kulamo ku leeyihiin saraakiil ka tirsan Ciidamada Itoobiyaanka ah iyo Saraakiil ka tirsan Maamulka Dooxada Shabeele.
Lama xaqiijin karo waxyaabaha dhabta ah ee ay uga wada hadlayaan dhinacyada halkaasi ku shiray, waxaase la xaqiijinayaa in ciidamada Dowlada Itoobiya iyo gaadiid dagaal oo tiro badan ay ku soo qul qulayaan gudaha gobolka .
Dadka deegaanadaasi ku dhaqan oo lahadlay xafiiska SBC International ee Baladweyne waxa ay xaqiijiyeen in ciidamada Itoobiya iyo maamulka dooxada Shabeele ee halkaasi ka arimiya ay leeyihin kulamadan kuwaas oo aan la ogeyn waxa ka soo baxay.
Dhinaca kale tan iyo markii ay soo shaacbaxday in ciidamada Dowlada Itoobiya ay gudaha u soo galeen gobolka ayaa waxaa ka bilowday gudaha magaalada Baladweyne xarunta gobolka oo ay maamulaan xarakada Alshabaab dhaq dhaqaaqyo ay sameynayaan xoogaga xarakada Iyagoona muujinaya diyaar garow ka dhan ah ciidamada Itoobiyaanka ah.
Dadweynaha gobolka ayaa xaqiijinaya in wadooyinka magaalada iyo goobaha masaajida ah ee Baladweyne laga dareemi karo dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo hadalo ku wajahan la dagaalanka ciidamada Itoobiya oo ay sameynayso Xarakada Shabaab Almujaahidiin.
Sikastaba ha ahaatee waxaa soo baxayay mudooyinkii dambe hadalo is qilaafsan oo qeexaya imaatinka ciidamada Itoobiya gudaha qeybo ka mid ah gobolada Bartamaha, waxaase tani ay ka dhigeysaa mid jirta in ciidamada Itoobiya ay ku sugan yihiin gudaha Dalka.